Awusenakho ukuthotywa phantsi kwi-iOS 8 | IPhone iindaba
Nangona i-iOS 8 ibikunye nathi iiveki ezininzi, kude kube ngoku kunokwenzeka ukwenza ifayile ye Yehla kwi-iOS 7.1.2 ngesandla ukusukela uApple eqhubeka nokusayina i-firmware, nangona kunjalo, loo nto inokwenzeka sele ivaliwe kwaye ukusebenza kwe-iOS 7 ngekhe kwenzeke kwakhona.
Ngale ndaba iindaba ndlelantle esemthethweni kuhlobo lwamva nje lwe-iOS 7Ke ukuba uhlaziye kwi-iOS 8 kwaye uyazisola, awungekhe ubuye umva. Ukuba okwangoku une-iOS 7 kwaye ubuyisele, i-iTunes izakukhuphela ngokuzenzekelayo uguqulelo lwamva nje lwe-iOS 8 olukhoyo ngelo xesha, kuba yi-iOS 8.0.2 eyona ikhoyo ngoku emva kwesikrelemnqa se-iOS 8.0.1.
Ukuba ungomnye wabo baphule intolongo, yithathele ingqalelo le nto xa usenza naluphi na uvavanyo okanye iimvavanyo ukusukela ukuba kukho impazamo eyakunyanzelayo ukuba ubuyise, uya kuphulukana nokuqhekeka kwejele kungenathemba ukuba inokwenziwa kwi-iOS 8, into esele iqhubeka kodwa ngaphandle komhla wokukhutshwa okulindelweyo.
Ngokuqinisekileyo ezi ndaba ziyalichaphazela iqela le- Uxolo wenze i-iOS 8 Kwaye ufumanise ukuba isixhobo sakhe asisebenzi njengangaphambili, siphulukana nobushushu ngokutshintshela kuphuculo olungasoloko luthethelela ukulahleka kokusebenza, ngelishwa, akukho sisombululo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 7 » U-Apple uyeke ukusayina i-iOS 7.1.2, awusenakho ukuthotywa kwi-iOS 8
Umsebenzisi Android sitsho
Ndiyazi ukuba oku akukho semxholweni. Kodwa kutheni ubeke intengiso yesayizi yescreen ngamanye amaxesha awunakuphuma kuyo Akukho ndlela ... yaap imali sele indinqunqa kwezi ntsuku ndingene kuyo sele indicaphukisile
Phendula kwi-android yomsebenzisi
Ngenxa yokuba imali ihamba kuqala phambi kwethu bafundi, kuyanyanyisa ukuhamba ukusuka kwi-iPhone kule webhusayithi, iyacekisa kodwa iyenyanyeka ukuya kwinqanaba lokuba ukwazi
Sebenzisa iibhlokhi kwaye ujije ezo zikwiwebhu…. amawaka entengiso elizothe awabuleli!
kwizixhobo ezingahambelani ne-i8, sinokuhlala sibuyisela kwi-ios 7.1.2 kunjalo?
Ukuba isixhobo sakho asihambelani awunakho ukulayisha kwi-ios 8, ukuba uthetha nge-iphone 4 ewe, uya kuba nakho ukuyibuyisela kodwa ungayilayishi ku-8
Ewe uHanni3al1986. Ngamanye amagama, i-iPhone 4 kwaye iyeke ukubala ...
Molo ekuseni ndine-iPhone 4 S ene-iOs 7.1.2 enesiphene sokuqhekeka entolongweni andizukuya kwi-8 nangaphantsi emva kokubona ukuba i-8 ayiqhubeki njengoko kufanelekile, umbuzo wam kwaye nolunye uthotho lwe-iphone Ngaba i-2g 3g ii-3Gs ezi-4 azisayi kuphinda zisebenze? kwaye yintoni ubomi obuluncedo be-iphone 4s?
Ukuba ziyaqhubeka ziluncedo, oko kuthethwa yiposti kukuba ukusukela ngoku ii-iPhones esele zilayishwe kwi-8 azisayi kuphinda zikwazi ukukhuphela ku-7.1.2 okanye kolunye uguqulelo lwangaphambili ...
Ndihlaziyiwe kwaye ngoku andinakukwazi ukuqhagamshela i-ipad yam kwi-tv ​​ngentambo ye-hdmi kwindawo esemgceni, indinika impazamo.
UGabriel Roa sitsho
Ewe, molo, ndiyifundile ukuqala kwakhona i-apula tv kunye ne-ipad yakho kule meko, ukuze ibuyiselwe kwaye isebenze (ndiyaphinda, ndiyifunde kwelinye iphepha)
Phendula uGabriel Roa
Abantu endicinga ukuba kufuneka ndicacise ukuba ungathoba na ukuba i-SHSH igcinwe.?!
Molo, lala kakuhle, ndinombuzo, ndiyathemba ukuba ukhona umntu onokundiphendula… .. Ndifakile iOS 8 kwi-iPhone yam, yi-iPhone 5, kodwa ngokunyanisekileyo, bendingayithandi ifowuni yam, ayisebenzi njengangaphambili…
Ndingathanda ukwazi ukuba ndingayifomatha na ifowuni yam okanye ukuseta kwakhona, ngaba umntu onokuthi andincede ndibuyise i-iOS 7 ??? ndicela undicenge
Ndinesisombululo (okanye mandithi, ndinaso "isisombululo"). Ilula kakhulu: ukuba ithebhulethi yam elandelayo ayisiyo-iPad.
UAlejandro Marin sitsho
angelp22ANGEL oko kufana nokuthi isisombululo esingcono kukuba awunayo ithebhulethi, i-smartphone okanye i-pc, kwaye ngenxa yoko akuyi kufuneka uphucule okanye wehlise.
Phendula u-Alejandro Marín
Alejandro, ndiza kuba nepilisi, kodwa ayizukuba yiApple. Into endiyenzayo nge-iPad yam ndingayenza ngokugqibeleleyo nge-Samsung ene-Android, umzekelo.Ayikho enye indlela ejikeleze, ngenxa yomgaqo wolawulo olugqibeleleyo olunayo iApple ngesixhobo esithengisayo, ukuya kuthi ga kwisigqibo sayo , inkqubo yokusebenza ekufuneka uyisebenzisile, nokuba awufuni, ngenxa yokucotha kwayo.
Ngokuqinisekileyo, phakathi kweenjongo zabo ezimnyama yile iya kukwenza ukuba uthathe isigqibo kungekudala sokuthenga enye "entsha" (kuba icacile kum):
Xa ndathenga i-PC yam yokugqibela, ndakrazuka phakathi kokuthenga iMac okanye umatshini olungileyo weWindows. Ukuqinisekisa, ndiboleke ilaptop kuApple (andikhumbuli ukuba ibizwa njani), ekufuneka ndiyisebenzele ekhaya iiveki ezimbalwa.
Isiphumo: nangona umbono wokuqala wekhompyuter ye-Apple ungo «upholile, kulula kangakanani yonke into, ... upholile kangakanani ...) ngexeshana elifutshane uyakuqonda ukuba umiselwe kangakanani ukuba ufuna ukusebenzisa ikhompyuter ngakumbi ngaphandle nje (ngoxolelo, jilipoyadas).
Umatshini olungileyo weWindows undinika ulawulo kumatshini, hayi ngenye indlela
Ndigqibele ukuthenga i-Intel Core, i7, ngeWindows 7, kunjalo.
Molo, bendifuna ukwazi ukuba ndiyayihlaziya na i-iPhone 5s yam ukuya kuhlobo 7.1.2, ingaba izakundibuza nge-sim khadi? NguMelika, kodwa iyasebenza, kuyandikhathaza ukucinga ukuba ukuba ndiyayihlaziya ndiza kucela i-sim ehambelanayo, kwaye andinayo, ungawuphendula umbuzo wam?
UMario Arteaga obambe umfanekiso sitsho
Molo.Ndine-iphone 4 enomxholo ocinyiweyo kwaye xa izama ukuyiqala, ithumele «Impazamo yokwenza kusebenze. Ndizamile ukuhlaziya i-firmware kwaye ndiyibuyisela ngogcino kodwa ayisebenzi.
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba ndingenza ntoni ukusebenzisa iselfowuni?
Phendula uMario Arteaga
Imozulu engaphantsi komhlaba isungula iwijethi kwi-iOS 8
IGoodReader ngoku ixhasa iCloud Drive kunye neHandoff